प्रविधी को विशिष्ट सुविधाहरू "सैमसंग" सधैं छ कि एक अपवाद छैन गुणस्तर र विश्वसनीयता र ल्याप्टप लागि यो निर्माता भएको छ। पहिलो प्रश्न - सैमसंग ल्यापटप, हासिल गरेको छ जो कसैले लागि "कसरी यदि आवश्यक यसलाई खोल्ने गर्न"। मूल्य विभाग को र पूर्ण सेट नोटबुक मोडेल को सबै किसिम "सैमसंग" धेरै मुख्य भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
Ultrabooks - अति-पातलो, महंगा प्रतिष्ठा मोबाइल जीवन शैली लागि सुविधाजनक छन् कि संकेतक।
गोली पीसी - टच प्याड को एक संकर, एक ल्यापटप लागि कुञ्जीपाटी वा डकिंग स्टेशन द्वारा परिवर्तित छ। छैन भन्दा शक्तिशाली, तर धेरै सहज।
प्रदर्शन - एक शक्तिशाली प्रोसेसर र ग्राफिक्स प्रदर्शन संग मानक आकार को ल्याप्टप।
तपाईं भन्नेछु अनलाइन आउन सक्नुहुन्छ मद्दत गर्न यस समयमा कि सम्झना कसरी एक ल्याप्टप चयन गर्न सैमसंग। कसरी यसलाई चरणहरु मा खोल्ने गर्न पछि छलफल गरिनेछ।
ल्यापटप सैमसंग R540: विवरण
ल्याप्टप को प्रदर्शन को उज्ज्वल प्रतिनिधि। यो मोडेल को ध्यान आकर्षित पहिलो कुरा - एक असामान्य रंग योजना। कालो-र-सेतो प्लास्टिक न्यानो को भारी ठूलो बीच, असामान्य संरचित रूख मात्र आँखा तेतैतिर छ, तर पनि खरोंच विरुद्ध एक उत्कृष्ट सुरक्षा हो। हो, "सैमसंग R540" व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई को आनन्द नेतृत्व छैन, तर तपाईं एक महान सुसज्जित सबै आवश्यक connectors र वायरलेस इन्टरफेस संग "workhorse", एक शक्तिशाली, चाहनुहुन्छ भने - विकल्प unambiguous छ। ल्याप्टप र कठिन खेल, हामी सेटिङ परिवर्तन गर्न थोरै मात्र आवश्यक "तान्नुहोस्"।
विशेषताहरु आफु को लागि कुरा - एक शक्तिशाली इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, 4096 मेगाबाइट RAM को, गर्न 320 जीबी योग्य ग्राफिक्स कार्ड एक ठूलो हार्ड ड्राइभ - अति गतिशीलता Radeon HD 5145. धनी परिधीय सेट: क्यामेरा, कार्ड रिडर, नेटवर्क जडानहरू - ब्लुटुथ, वायर्ड इथरनेट LAN र WI -fi। वाइडस्क्रिन 16:915.6 इन्च को एक विकर्ण संग HD स्क्रिन एलईडी।
"सैमसंग" नोटबुक को सही विश्लेषण कसरी बनाउने?
तपाईं पहिले नै सैमसंग ल्यापटप खरिद गरेका छन्? यसलाई कसरी खोल्ने र कुन अवस्थामा आवश्यक छ अब यसलाई सामना। जब ल्यापटप अचानक "असफल" गर्न, "ब्रेक" सुरु वर्ष को एक जोडी को लागि राम्रो काम गर्छ, र CPU तातो अलार्म स्क्रिनमा देखिन्छ स्थिति बारम्बार उठ्छ। सेवा केन्द्र टाढा, वा लामो समय "workhorse" संग भागमा लागि कुनै तरिका हो? यो आतंक आवश्यक छैन।
तपाईं ल्यापटप "सैमसंग" कसरी खोल्ने गर्न जान्नु आवश्यक छ। जब प्रकाश कार्यक्रम संग काम र प्रोसेसर यस्तो मनपर्ने खेलौना रूपमा भारी आवेदन लागि "टूट" छैन नोटबुक रातो तातो छ भने, त्यसपछि यो संभावना यसलाई निवारक सफाई गर्न समय छ। यो निवारक सफाई र कसरी खोल्ने र सैमसंग ल्यापटप सफा गर्न के प्रश्न उठ्छ।
रोकथाम - एक आवश्यक उपाय
रोकथाम - एक जटिल घटना, र, ठंडा प्रणालीबाट धूलो र माटो हटाउने बाहेक, कि छ, प्रशंसक र रेडिएटर, थर्मल पेस्ट प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। यो dries र ठंडा प्रणाली, पनि धूलो को अभाव मा तात्दै तिर जान्छ गर्न सीपीयू देखि गर्मी सञ्चालन गर्न ceases रूपमा यो आवश्यक छ। एकै समयमा यो Motherboard देखि धूलो हटाउन र किबोर्ड सबै मलबे हटाउन राम्रो हुनेछ। किन सफा गर्ने "Motherboard"? उच्च आर्द्रता मा यसलाई संचित धूलो हालको सञ्चालकको, छोटो सर्किट र सिस्टम Motherboard को उत्पादन सक्छ जो रूपमा कार्य गर्न सुरु हुन्छ।
तपाईं दोस्रो प्रश्न सैमसंग ल्यापटप मालिक थाहा के गर्नुपर्छ? कसरी यो अलग लिने? कोरियाली निर्माता अद्वितीय विशेषताहरु र खिच्छ संग व्यक्तिगत फास्टनरों रूपमा प्रत्येक मोडेल प्रदान गर्न। प्रत्येक मोडेल को samsung नोटबुक disassembly कडाई व्यक्तिगत छ, र "samsung" एक फरक प्रकारको लागि प्रयोग निर्देशन प्लास्टिक latches गर्न घातक क्षति हुनेछ।
सँगै, हामीलाई ल्यापटप "सैमसंग R540" कसरी खोल्ने गर्न बुझ्न गरौं। यो मोडेल को जुडनार को बरु जटिल प्रणाली भए तापनि सफाई एक वर्ष बाहिर कम्तिमा एक पटक लगे गर्नुपर्छ। लेआउट "सैमसंग" उदाहरणका लागि, एकाइहरु "Toshiba" र प्रश्न प्रयोगकर्ता कि, कसरी खोल्ने गर्न सैमसंग नोटबुक, धेरै लोकप्रिय छ, भन्दा बढी जटिल छ।
चेतावनी! R540, साथै कुनै पनि ल्यापटप को निराकरण, एक शक्ति आउटएज सुरु हुनु पर्छ। यो नोटबुक शक्ति आपूर्ति को प्लग हटाउन र ब्याट्री हटाउन आवश्यक छ।
डीभिडी-रम, हार्ड डिस्क र हटाउँदै नेटवर्क कार्ड WI-FI। यो गर्न, ल्यापटप मामला गर्नाले, डीभिडी-रोम ड्राइभमा पकड को स्क्रू र ODD नामित वोल्ट नट आदि खोल्नु। डीभिडी-रोम हटाउने र रिबन केबल विच्छेदन। विनचेस्टर स्लट बिना खाली आवरण पनि नोटबुक को तल मा स्थित छ। यसको हटाउनका लागि दुई स्क्रू वोल्ट नट आदि खोल्नु गर्न आवश्यक छ। हार्ड ड्राइभ सीधा पकड unscrewed छ स्क्रू टोपी हटाउने पछि, त्यसपछि हार्ड डिस्क को कनेक्टर हटाइएको गर्न सकिन्छ। हटाउने एकाइ वाइफाइ, तल पनि स्थित वेंटिलेशन स्लट संग आड स्थित लागि, दुई स्क्रू unscrewed। कवर हटाउँदै छेद परे जा एक भट्ठा प्रदान गरिएको छ एक कुनामा जो एक वर्ग प्वाल छ। यो कि स्लट छन् दुई कालो तार तान्नु र सकेट हटाउनुहोस् आवश्यक छ। एक सानो शुल्क स्लट देखिने छ, connectors र स्क्रू संग हटाउन।
हटाउँदै किबोर्ड। किबोर्ड retaining स्क्रू ODD र kbd लेबल। यसैले स्क्रू रहिरहन्छ kbd वोल्ट नट आदि खोल्नु। किबोर्ड समातेर पाँच latches, र बटनहरू Esc, F2, F8 बीच disposed, कुनै पनि कार्ड प्रयोग गरेर तोड, मेटाउने र ल्यापटप आवास खिच्छ रोक्नुहोस्। प्लास्टिक मा creases जोगिन गर्न एक धातु उपकरण प्रयोग गर्न राम्रो छ। किबोर्ड सतह माथि उठाएको छ र Motherboard मा कनेक्टर देखि पृथक छ। यो गर्न, कनेक्टर को कालो भाग - महल - लम्ब "Motherboard" उठाएर छ विच्छेद सम्म पुल।
पछाडि आवरण हटाउने। तपाईं 19 स्क्रू ल्याप्टप तल ढक्कन मा बाँकी वोल्ट नट आदि खोल्नु अघि, तपाईं दुई plume सकेट तल बायाँ कुनामा किबोर्ड र टचप्याड तल को recesses मा स्थित हो बन्द गर्न आवश्यक छ।
गर्मी डुब्नु सिस्टम हटाउँदै। पछाडि आवरण खोलेर पछि उपलब्ध हार्डवेयर ठंडा सिस्टम बनेको छ। फ्लेक्स आपूर्ति प्रशंसक विधानसभा गर्मी डूब को ट्यूब देखि unscrewed छ जो पछि, जडान विच्छेद भएको छ।
रोकथाम। धूलो, माटो र पुरानो thermopaste हटाउँछ। नयाँ थर्मल चिल्लो विशेष spatulas वा पारंपरिक प्लास्टिक कार्ड को माध्यम द्वारा पातलो पत्र लागू गरिएको छ।
यो कठिन कसरी ल्यापटप सैमसंग R540 खोल्ने गर्न बुझ्न छ। निस्सन्देह, सेवा केन्द्र प्रतिनिधिको ल्यापटप को एक स्वतन्त्र विश्लेषण ग्यारेन्टी राखिएको धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया थियो। तर, यदि वारंटी अवधि समाप्त भएको छ, वा त्यहाँ आपतकालीन अवस्था, यसको क्षमता, को disassembly अनुक्रम र धैर्य उत्कृष्ट परिणाम दिन हुनेछ अनुपालनको सुधार गर्न ल्यापटप सैमसंग कसरी खोल्ने गर्न यन्त्र मालिक सोच्न बाध्य भएको थियो।
एक ल्यापटप टाँसिनेकुञ्जी: समस्या के के?
एक सिंहावलोकन, वर्णन, समीक्षा: ल्याप्टप लागि विश्वव्यापी एडप्टर। नोटबुक लागि आपूर्ति एकाइ
कसरी ल्यापटप सस्तो तर राम्रो चयन गर्न? सुझाव, सिफारिसहरू, समीक्षा
कसरी ल्यापटप वाइफाइ बन्द गर्न? कसरी वाइफाइ पासवर्ड परिवर्तन गर्न
कसरी एक ल्याप्टप संग एक ल्यापटप जडान गर्न? दुई वायरलेस तरिका
पिज्जा Aerogrill: एक स्वादिष्ट पकवान को लागि एक नुस्खा
यसको प्रयोग गर्न शरीर लागि खुरमा को प्रयोग, साथै contraindications
हृदय दबाव: कसरी विकृति जोगिन
यो हर्मोन टेस्टोस्टेरोनको र मानव शरीर मा यसको समारोह
इपिफ्यानी Name: लक्षण र रीतिथितिहरू। को इपिफ्यानी Name हव्वाले मा रीतिथितिहरू
केक चकलेट - सपना साँचो मीठो दाँत आउन
ग्याँस बिना घर गर्मी कसरी सस्तो गर्न? बिना आवास ग्याँस ताप लागि वैकल्पिक ईंन्धन
ककुल र टमाटरहरूको सलाद
Discography बिच्छुओं: समूह एल्बम बारेमा विवरण
छाला मा अस्पष्टीकृत सेतो स्थलहरू - यो के हो?